Notsapainay ny Samsung Gear VR | Androidsis
Alfonso ny voankazo | | IFA, hevitra
Rehefa nanakaiky ny fijoroan'i Samsung izahay hijery ny zava-baovao ao aminy, dia nahita faritra mitokana izahay Samsung Galaxy Note 4, ny Samsung Galaxy Note Edge ary ny solomaso virtoaly virtoaly Samsung Gear VR.
Ny marina dia rehefa nahita azy ireo aho dia tiako ny volavolain'izy ireo saingy noheveriko fa ho kopia henjana izy ireo hifaninana amin'ny Oculus Rift andrasana. Tsy misy zavatra lavitra amin'ny zava-misy. Ireo fahatsapana navelany taminay, araka ny hitanao amin'ny horonantsary mandinika ny Gear VR izahayTsy mety nahafa-po kokoa izany.
Samsung Gear VR dia mampiasa teknolojia Oculus Rift
Ary tena tsara dia tsara ilay fitaovana. Ataovy ao an-tsaina izany mila Samsung Galaxy Note 4 ianao hiasa, ka raha tsy mikasa ny hividy phablet Koreana vaovao ianao dia marina fa tsara kokoa ny miandry ny Oculus Rift, fa raha mahazo Note 4 ianao dia tehirizo kely kokoa ary miomàna hiditra amin'ny zava-misy virtoaly.
Ataovy ao an-tsaina fa ireo tovolahy ao Samsung dia niara-niasa tamin'ny ekipan'ny Oculus Rift mba hahazoana antoka fa ny solomaso misy kalitao avo indrindra. Ary hoy izy ireo! Raisina an-tsaina izany toa misy sarimihetsika sarimihetsika 2 metatra miala anao, Azonao an-tsaina fa tanteraka ny fanitrihana.
Ny Samsung Gear VR dia namboarina tsara. Mirefy 90 milimetatra ny haavony, 198 ny sakany ary 116 ny hateviny, matanjaka sy maivana ilay fitaovana, tsy manelingelina na oviana na oviana. Mampalahelo fa ilay zazalahy tao amin'ny booth dia tsy nahay nanamboatra ny lantiro tamin'izay tsy mila manao solomaso, Ka tsy maintsy nanandrana azy ireo niaraka tamin'izy ireo aho.
Amin'ny iray amin'ireo sisiny no ahitantsika ny bokotra hifehezana ny fiarovan-doha. Manana bokotra ara-batana hisintonana azy isika, ary koa bokotra fikitika hahafahana miditra amin'ireo horonan-tsary samihafa. Asongadino izany Azontsika atao ny mampiasa ny Samsung Gear VR hiditra amin'ny fampiharana samihafa amin'ny Note 4, zavatra tokony hisaorana.
Ny hany hitako dia ny zava-misy fa ny fiarovan-doha tsy manana mpampitohy mpampita ka mampiasa batterie an'ny telefaona. Tombony iray satria mihena ny lanjan'ny Samsung Gear VR, saingy fatiantoka ihany koa, satria mampiasa ny bateria finday izahay.
Ny hevitro manokana? Samsung dia nahavita asa lehibe; ny vatan-tsambo dia manana famaranana tena tsara ary tena mahatsapa ny fahatsapana. Raha te hividy Note 4 ianao dia manome toky anao fa ny Samsung Gear VR dia fividianana saika voatery. Ary ny tsaho farany milaza izany 199 euro no vidiny...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Samsung Gear VR, nosedraina ny solomaso virtoaly virtoaly an'ny Samsung
Ny bq Aquaris 5, 5HD ary 5.7 dia havaozina amin'ny Android KitKat amin'ny 15 septambra